सिरियाका लागि उदयपुमा नागरिक समाजको दिप प्रज्वलन
१५ फागुन , गाईघाट
सिरियाको पुर्वि गुटा क्षेत्रमा बिगत आठ दिनयता भैरहेको निरन्तर हिसांत्मक युद्धमा परी ज्यान गुमाउनुपरेका बालबालिकाहरुको उद्धारको लागि मंंगलबार साझ गाईघाट बजार मेनचोक स्थित उदयपुरका नागरिक समाजले दिप प्रज्वलन गरेका छन् । क.. .. .. …
सिरियाका हृदयविदारक तस्विरहरु: मानवता लोप भएकै हो त ? (फोटो फिचर)
सिरियामा मानवता लोप भएको आभास देखिन थालेको छ । सिरिया सरकारले विद्रोही समुह भन्दै गरेको बम हमलामा परि पाँच सय भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । एक अध्यन अनुसार सो आक्रमणमा १२१ जना भन्दा धेरै बालबालिका मारिएकाहरु मारिएका छन् ।
सिरिया सरकारले रुसको सहयोगमा विद्रोहीको क्षेत्रमा एक.. .. .. …
यी दुई स्टार खेलाडीबीच एउटा अनौठो संयोग परेको छ । कमै मात्र बलिङ गर्ने.. .. .. …
अब चाडै नै उत्तर कोरियाले आफ्नो शक्ति .. .. .. …
अमेरिकी कोरियाली सैन्य अभ्यासको विराेधमा खतरनाक प्रतिक्रिया
प्योङयाङ ३ कार्तिक । उत्तर कोरियाले संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सुरु गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोध गरेको समाचार छ। यी दुई देशले गएको सोमबारदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेका छन्। उत्तर र दक्षिण कोरियाको समुद्रको सीमामा पर्नेगरी यी दुई देशले सो अभ्यास सुरु गरे.. .. .. …
उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम ५० किलोटनको भएको पुष्टी, पड्किए के हुन्छ ?
सोल २० भाद्र । उत्तर कोरियाले आइतबार गरेको आणविक परीक्षण करिब ५० किलोटनको रहेको पाइएको छ । यो क्षमताको बमले सयौं वर्षसम्म असर गरिरहने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले हजारौं वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विनाश मच्चाउन सक्छ । बन पड्किसकेपछि पनि यसको रेडिएसनले लामो समयसम्म मानिसलाई असर गर्.. .. .. …
ट्रम्पका छोरा मिडियामा देखिए
१३ भाद्र , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ११ वर्षका छोरा बारोन ट्रम्प पिता डोनाल्ड र आमा मेलियानाका साथमा आइतबार ह्वाइट आउसको दक्षिणी लनमा देखिए । उनीहरु नजिकैको क्याम्पमा विदा मनाएर फर्किएपछि सार्वजनिक रुपमा देखिएका हुन् । तस्वीरः एपी/रासस
जापानमाथि उत्तर कोरियाको मिसाइल, मानव बस्तीमा भागाभाग
बीबीसी १३ भाद्र । उत्तर कोरियाले पुन मिसाइल परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको मिसाइल उत्तरी जापानमाथि बाट उड्दै समुन्द्रमा खसेको जापानले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ।
उत्तर कोरियाले मिसाइल परीक्षण गर्दा कुनै पनि मिसाइल जमीनमाथिबाट गएको थिएन। उत्.. .. .. …
चीन-भारत सीमामा गोली किन चल्दैन?
अादर्श राठाैर/ बीबीसी
८ भाद्र , भारत र चीनबीच दोक्लाममा गतिरोध उत्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भएको छ। दुवै देशका सैनिक आमने-सामने छन्।
त्यहाँको वातावरण पक्कै पनि तनावपूर्ण छ तर अहिलेसम्म दुवै देशले संयम कायम राखेका छन्। कुनै हिंसाको खबर छैन।
भारत-चीनबीच तनाव उ.. .. .. …
भारतसँग युद्धको पक्षमा चिनियाँ जनता !
बीबीसी ७ भाद्र । चीनको सरकारी संचामाध्यमले भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सौहार्दपूर्ण टिप्पणीको स्वागत गरेको छ। साथै जोड दिँदै चीनले भनेको छ, ‘डोकलाम विवादको सुल्झाउन भारतीय सैनिक फिर्ता हुनु आवश्यक छ।’
भारत र चीनबीच भुटानसँग जोडिएको सीमा डोकलाममा सुरु भएको विवाद तेस.. .. .. …